Sidee dib loogu soo celiyaa qaybtii hore ee Android | Androidsis
Ignacio Sala | 01/07/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 01/07/2021 14:35 | Tababarada
Nooc kasta oo cusub oo ka mid ah Android waxaa ku jira tiro badan oo hawlo cusub ah, oo ay weheliyaan hagaajinta amniga. Sababtan awgeed, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad rakibto nooca ugu dambeeya ee Android ee la heli karo wakhti kasta, oo ay weheliso casriyeynta amniga kala duwan ee soo-saaruhu soo daayo bil kasta ama saddexdii biloodba.
Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood, terminaalku kama jawaabo wixii ay ahayd iyo suurtagalnimada ku soo celi nooca Android. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ka ogaanno geeddi-socodkani waa inay kuxirantahay doorsoomayaal kala duwan oo ku lug leh soo saaraha, helitaanka nooca ...
1 Sida loo soo celiyo qaabkii hore ee Android
1.1 Ku soo celi Samsung noocii hore ee Android
1.2 Ku soo celi Huawei noocii hore ee Android
1.3 Ku soo celinta OnePlus qaabkii hore ee Android
1.4 Ku soo celi Oppo noocaagii hore ee Android
1.5 Ku soo celinta Realme qaabkii hore ee Android
1.6 Ku soo celi Xiaomi qaabkii hore ee Android
2 Runtii ma u baahan tahay inaad ku laabato qaabkii hore ee Android?
3 Maxay ka dhigan tahay in lagu soo celiyo qaabkii hore ee Android?
4 Halkee lagala soo bixi karaa noocyadii hore ee Android
U soo noqoshada nooca Android, sida aan kor ku soo sheegay, waa geedi socod ku lug leh arrimo badan. Midka ugu horreeya uguna muhiimsan waa taas soo saare kastaa wuxuu adeegsadaa qaab kale Si loo fuliyo hawshan, markaa waxay kuxirantahay soo saaraha shirkadeena, waa inaan fulinaa hal nidaam ama mid kale oo aan u isticmaalnaa codsiyada qaar iyo kuwa kale.
In kasta oo boosteejooyinka qaarkood, waxaan ku fulin karnaa hawshan adigoo si toos ah ugu soo dejisan kara ROM-ka kaadhka xusuusta, soosaarayaasha kale ayaa nagu casuumaya isticmaal codsi kombiyuutar inuu awoodo inuu howshan fuliyo. Taasi sida ay dhici karto, markaa waxaan ku tusinaynaa, qiyaas ahaan, tallaabooyinka la raacayo si loogu soo celiyo nuqul hore oo Android ah.
Ku soo celi Samsung noocii hore ee Android
Muddo dhowr sano ah, codsigii ay Samsung u fidisay macaamiisheeda si ay u rakibaan noocyo cusub oo Android ah, iyo sidoo kale kuwii hore, ayaa laga soo wacay Odin illaa Samsung Smart Switch, codsi aan si bilaash ah uga soo dejisan karno adoo maraya xidhiidhkan iyo waa maxay diyaar u ah labada Windows iyo Mac.
Mar alla markii aan soo degsanno arjigan iyo nooca qalabka ee qalabka aan dooneyno inaan ku rakibno, waxaan fureynaa dalabka oo waxaan raacaynaa dhammaan tillaabooyinka uu codsigu na tusayo inaan ku fulin karno Ku soo celinta qaabkii hore ee Android.
Ku soo celi Huawei noocii hore ee Android
Codsiga ay soo saaraha Aasiya soo diyaariyeen annaga si aan ugu laabanno noocyadii hore ee Android waxaa loo yaqaan Huawei HiSuite, codsi aan kari karno ku soo dejiso bilaash boggan waxaana loo heli karaa Windows iyo Mac.
Marka lagu daro soo celinta nuqulkii hore ee Android, sidoo kale waan sameyn karnaa nuqul nuqul ah, maaree dhammaan xogta ku keydsan qalabkeena, soo celinta nidaamka, rakib codsiga.
Ku soo celinta OnePlus qaabkii hore ee Android
Si ka duwan shirkadaha kale ee nagu qasbaya inaan isticmaalno codsi kumbuyuutar ah, soosaaraha OnePlus wuxuu howsha ka dhigayaa mid aad u fudud oo dhaqso badan, maadaama ay tahay inaan kaliya nuqulo ROM-ka aan dooneyno inaan ku rakibno. keydinta gudaha ama dibedda qalabka.
Kadibna taleefanka gacanta oo dansan, waxaan riixnaa batoonka korontada oo ay weheliso badhanka hoos u dhig codka si aad u hesho marinka aaladda bilowga aaladda, halkaas oo aan ku dooran karno xulashada Recovery oo dooro meesha uu ku yaalo faylka uu kujiro ROM-ka aan rabno inaan rakibno.
Ku soo celi Oppo noocaagii hore ee Android
Iyadoo la tixgelinayo labada Oppo iyo OnePlus, ka tirsan yihiin isla kooxdaas, Habka loo soo celiyo nuqulkii hore ee Android waa isku mid labada qalabba. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa nuqul ka mid ah sawirka nooca Android-ka ah ee aan dooneyno inaan dib ugu soo celino keydinta qalabka.
Kadib, iyadoo taleefanka casriga ah dansan yahay, waxaan riixnaa batoonka korontada oo ay weheliso badhanka hoos u dhig codka si aad u hesho marinka aaladda bilowga aaladda, halkaas oo aan ku dooran karno xulashada Recovery oo dooro halka faylka keydku yaalo.
Ku soo celinta Realme qaabkii hore ee Android
Habka loo soo celiyo nooc hore oo ku saabsan casriga casriga ah ee Android waxay la mid tahay tan Oppo iyo OnePlus, maaddaama saddexda shirkadood ay ka mid yihiin isla koox ganacsi.
Marka aan kudayano ROM-ka keydinta qalabka, waxaan damineynaa qalabka. Kadib, waxaan riixnaa batoonka korontada oo ay weheliso badhanka hoos u dhig codka si aad u hesho marinka aaladda bilowga aaladda, halkaas oo aan ku dooran karno xulashada Recovery oo dooro halka faylka keydku yaalo.
Ku soo celi Xiaomi qaabkii hore ee Android
Haddii aan tixgelinno tirada badan ee qalabka ee soo saaraha Aasiya soo saaro sannad kasta, suurtagalnimada helitaanka nooca Android ee aan u baahanahay waxay noqon kartaa howl aan macquul ahayn. Haddii aan nasiib u helnay inaan helno, waxaan u gudbeynaa koobiyee ROM-ka asalka keydinta gudaha qalabkeenna.
Kadib waxaan aadeynaa dhanka goobaha qalabkayaga, dhagsii qalabkeyga oo xulo Nidaamka casriyeynta.
Marka xigta, guji saddexda qodob si toos ah oo guji Xullo xirmo cusboonaysiin ah, waxaan doorannaa feylka, oo aan horey ugu magacdarnay sida cusboonaysiin.zip hawsha dib u soo celinta ayaa bilaabmi doonta.
Hoos u dhig Android, waa ereyga loo adeegsado Ingiriisiga si loogu noqdo qaybtii hore ee Android. Kani waa ereyga ay tahay inaad u adeegsato raadinta ROM-yada mobilada gaarka ah ee Ingiriisiga, maadaama ay kuxirantahay tusaalaha, waxay u egtahay inaadan heli doonin macluumaad Isbaanish ah, in kasta oo aad tahay luqadda saddexaad ee loogu hadlo badan yahay adduunka marka laga reebo Shiinaha iyo Hindida.
Runtii ma u baahan tahay inaad ku laabato qaabkii hore ee Android?
Sababaha nagu qasbi kara inaan ku laabanno noocii hore ee Android, waa inay marwalba maraan a waxqabadka qalabka liita, gaar ahaan markay tahay cusboonaysiinta ugu horreysa.
Laga soo bilaabo Android Guides, waxaan marwalba kugula talineynaa sug dhawr maalmood si aad u ogaato jawaab celinta ka dhagaha oo markaa la qiimeyn karo inay runti mudan tahay in la cusbooneysiiyo ama la sugo dhowr maalmood dhibaatooyinka ah nooca cusub ee la soo bandhigi karo si loo xalliyo.
Haddii ka dib markii aad ku cusbooneysiiso qalabkaaga nooca cusub ee Android, waxay bilowday inay u shaqeyso si qalad ah, waxay leedahay dhibaatooyin, cillad la'aan adiguna waxaad tahay isticmaale kaliya ee la kulmaya dhibaatada noocan ah, waxay u badan tahay inuusan ahayn nooca Android ee aad rakibtay , laakiin astaamo ah in waxaad u baahan tahay inaad dib uga soo celiso qalabkaaga xoq.
Markaad rakibayso nooc cusub oo Android ah, waa in kabadan inta lagugula taliyay inaad ka sameysid xoqida, taas oo ah, horey u soo celinta terminal-ka xoq. Sidan oo kale, haddii aan wax dhibaato ah ku qabno nooca hadda jira ee Android, ma jiidi doono ka dib markaan cusbooneysiino nooca cusub ee Android.
Maxay ka dhigan tahay in lagu soo celiyo qaabkii hore ee Android?
Nidaamka dib loogu soo celinayo nuqulkii hore ee Android, waa macquul tirtir dhammaan waxyaabaha ku keydsan xarunta, sidaa darteed ka hor inta aan hawshan la fulin, waa inaan nuqul nuqul ah ka samaysannaa dhammaan waxyaabaha aan dooneyno inaan keydinno.
Dhinac kale oo ay tahay inaynu ku xisaabtano waa kaas had iyo jeer suurtagal maahan in lagu laabto qaabkii hore ee Android. Soo saarayaasha qaar waxay xiraan suurtagalnimadaas, sidoo kale Apple waxay ku xirtaa cusboonaysiin kasta oo cusub oo ay ka soo saarto macruufka.
Sidan oo kale, soo-saareyaashu waxay hubiyaan in macaamiisha macaamiisha, had iyo jeer hayso nooca ugu dambeeya ee Android, oo leh dhammaan hagaajinta amniga ee la hirgeliyey, marka lagu daro shaqooyinka cusub ee lagu soo kordhiyay si looga faa'iideysto qalabka.
Halkee lagala soo bixi karaa noocyadii hore ee Android
Tani waa mid ka mid ah dhibaatooyinka aan wajaheyno markaan rabno inaan dib ugu laabanno noocii hore ee Android, maadaama aysan sahlaneyn in la helo ROM-yada gaarka ah ee boosteejooyinka.
Haddii ay tahay taleefan casri ah Samsung, xalka waa mid aad u fudud, tan iyo bogga internetka ee SamMobile (shabakad diiradda saareysa Samsung muddo ka badan toban sano), waxaan ka heli karnaa dhammaan noocyada ay jireen oo ay leeyihiin dhammaan qalabka Android ee soo saarahaan.
Haddii terminaalkaagu yahay Pixel, waxaa suurtagal ah in laga helo ROM-ka iyada oo loo marayo bogag internet oo kala duwan oo diiradda saaraya boosteejooyinkan. Waxyaabaha ayaa aad u murugsan haddii terminalkeennu uu ka yimid soo-saare kale, inkasta oo aysan ahayn wax aan macquul ahayn. Bogga internetka ee Horumarinta XDA Waxaad ka heli kartaa ROM-yada xarumo badan, ugu yaraan iibiyaasha ugu fiican, oo ay la socdaan tilmaamaha lagu fulinayo howsha.
Bog kale oo xiise leh oo ay tahay inaan tixgalino goorta hel nooc ka da 'weyn oo Android ah laga bilaabo terminaal aan ahayn Samsung, waa HTCmania, mid ka mid ah shirarka ugu caansan ee Isbaanishka ku jira taleefannada gacanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo soo celiyo qaabkii hore ee Android